Andry Rajoelina Tafiditra any Eoropa na dia tsy vita vaksiny aza ?
Parution du Vendredi, 30 Juillet 2021
Namoaka fampahafantarana ofisialy ny seraseran’ny Fiadidian’ny Repoblika omaly momba ny tsy maha eto an-tanindrazana
ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny takarivan’ny talata teo no re fa nanainga i Andry Rajoelina, izany hoe taorian’ny fitsidihany ny Kianja Barea Mahamasina. “Ankoatry ny maha Filohan'ny Repoblika azy dia Ray sy loham-pianakaviana ihany koa ny Filoha Andry Rajoelina ary manana andraikitra eo anivon'ny ankohonany sy ny vady aman-janany. Noho izany indrindra dia nanainga an-Tanindrazana izy, hanefa ny adidiny amin'ny fanatrehana ny "confirmation" an’ny zanany vavy tokana. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainana tokoa mantsy izany ary indrindra fitahiana sy fahasoavana lehibe avy amin' Andriamanitra. Ho tafaverina an-Tanindrazana ny tenany vao vita izany amin'ny alahady izao, hanohy indray ireo asa maro mbola miandry antsika", hoy ny seraseran’ny Fiadidian’ny Repoblika. Tsy fivoahana ofisialy amin’ny maha Filoham-pirenena izany, fa adidy ara-pianankaviana
MBOLA TSY VITA ?
"Ao anatin’ny fisokafana amin’ny ampahany amin’ny sisin-tanin’i Frantsa, na inona na inona antona, dia tsy misy ny fahazoan-dàlana manokana na « laissez-passer spécifique », fa tsy maintsy mampiseho ny porofo maha vita vaksiny feno amin’ny iray amin’ireo vaksiny 4 eken’ny Vondrona Eoropeanina, dia ny Moderana, Pfizer, Astra Zeneca na Johnson and Johnson, ary tsy maintsy ny iray amin’ireo. Ny vaksiny Covishield dia mbola tsy tafiditra ao ao anatin’ireo manam-pahefana ara-pahasalamana Eoropeanina", hoy ny Masoivoho Frantsay. Tsy afa-miditra any Frantsa izany raha tsy vita vaksiny. Ny alakamisy 10 jona no nisy ny fanehoan-kevitra nataon’ny Filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana taorian'ny fanaovany vaksiny teny amin'ny Foiben'ny PNUD Andraharo, fa efa nanao vaksiny niafina tany ambadimbadika tany ny ankamaroan’ireo mpitondra ireo. Tafiditra ao anatin’izany ve i Andry Rajoelina? Sa ve hafa mihitsy rehefa filoham-pirenena ka rehefa “négatif » fotsiny ohatra ilay Test PCR dia afaka mandeha n’aiza n’aiza. Hatramin’ny omaly mantsy dia tsy mbola nisy filazana ofisialy hoe nanao vaksiny ny Filoha Andry Rajoelina.
Vaky ny Miara-manonja Miroaroa saina ny mpanohana
Nivoaka tao anatin’ny fahanginany ireo depiote miisa roa ao anatin’ny Antoko TIM omaly, dia Rtoa Hanitra Razafimanantsoa sy Fidèle Razara Pierre, izay tsy re feo firy tao anatin’ny telo herinandro teo.
Alain Ramaroson Miara-dalana hatrany amin’ny ambany tanàna
Miara-dia hatrany amin’ny ambany tanana Atoa Alain Ramaroson, filohan’ny antoko Masters no sady filohan’ny voamieran’ny fiarovana teo anivon’ny filan-kevitra ambonin’ny tetezamita teo aloha.
Maitre Olala “Manangana ady amin’ny Katolika ny fanjakana”
Tonga taty amin’ny toeram-piasanay ety Ankadifotsy ny fianakavian’andriamatoa Paul Rafanoharana, hoy ny mpisolovava, Willy Razafinjatovo na maitre Olala.
Mgr Odon Razanakolona Tratry ny fandotoana manara-penitra ?
Omaly tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany maraina no tonga teny Andohalo, toeram-piasan’ny Arsevekan’Antananarivo Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona
Eliana Bezaza PSD “Avy misambotra angaha vao mitady porofo ?”
Naneho ny heviny tamin’ny alalan’ny Sekretera Nasionaliny Rtoa Eliana Bezaza ny antoko PSD, mikasika ny resaka fifofoana ny ain'ny Filoham-pirenena.
Miharatsy ny toe-draharaha Nijabaka tanteraka Rajoelina…
Tafiditra lalina I Andry Rajoelina ao anatin’izao toe-draharaha mafampana eto amin’ny firenena izao. Mitana ny sain’ny maro ny hoe: nisy nikasa hamono ity Filoha ankehitriny ity.